Somaliland Oo Riyo-maalmeed Ku Sheegtay Magacaabis Uu Sameeyay Madaxweynaha Soomaaliya - SomalilandPost
Home News Somaliland Oo Riyo-maalmeed Ku Sheegtay Magacaabis Uu Sameeyay Madaxweynaha Soomaaliya
Hargeysa (SLpost)- Dawladda Somaliland ayaa ka hadashay Ergay gaar ah oo Madaxweynaha Somaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu Shalay u magacaabay Geeska Afrika, Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed, kaasi oo ah Yuusuf Garaad Cumar Axmed.
War-saxaafadeed Maanta ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha dibedda JSL ayaa lagu sheegay in Magacaabistaas looga dan leeyahay in Beesha Caalamka lagaga marin-habaabiyo Qadiyadda Madax-bannaanida Somaliland.
War-saxaafadeedkaas ayaa u qornaa sidan “Jamhuuriyadda Somaliland waa dal madaxbannaan oo si buuxda oo u maamula xuduudihiisa dhul, bad iyo hawo. Somaliland waa dal bogcad muhiim ah kaga yaal qaaradda Afrika, gaar ahaan Badda Cas iyo marin biyoodka istaraatejiga ah ee Gacanka Cadmeed (Gulf of Aden).
Dawladda Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay marwalba u taagan tahay ilaalinta xasilloonida, nabad ku wada noolaashaha, iyo horumarka gobolka. Dawladda Somaliland waxa kale oo ay si dhaw u la socotaa xaaladda iyo isbeddelada gobolka ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda.”